Mashiinka Mashiinka & Goynta
Faylasha birta ah
Yang Quanlu ayaa lagu casuumay inuu kaqeyb galo kulanka "fikirka cusub + hantida aqooneed si kor loogu qaado horumarka tayada sare leh ee warshadaha" wuxuuna jeediyay khudbad
On January 3, 2020, Yang Quanlu, gudoomiyaha quangong Tools Co., Ltd., ayaa lagu casuumay inuu kaqeyb galo kulanka "fikirka cusub ee cusub + hantida aqooneed si kor loogu qaado horumarka tayada sare leh ee warshadaha" oo lagu qabto maalin walba dadka Beijing. Waxaa marti u ah Tao liming, tifaftiraha guud o ...
2020, aan sii wadno raadinta riyooyinkeenna, marna luminin waqtigeenna!
Waxaa qoray admin on 20-04-09
Maalmihii ugu dambeeyay, oof-wareenka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' wuxuu saameeyay quluubta ummada oo dhan. Xilliga xasaasiga ah ee lagula dagaallamayo cudurka faafa, shaqadii oo dhan waxay si firfircoon uga jawaabeen baaqii dowladda, iyadoo ay hoggaanka u hayaan hoggaamiyeyaasha shirkaddu, waxay si firfircoon tallaabo u qaadeen oo dhammaantood u baxeen ...
Warqad amaan ah oo Guo dheer, Wasaaradda amniga iyo deegaanka
Intii lagu gudajiray muddadii xasaasiga ahayd ee oof-wareenka ee ay sababtay nooca coronavirus, shirkadeena ayaa si firfircoon uga jawaabtay baaqii dowladda, iyadoo si guud loo xakameeyay faafitaanka degdegga ah ee cudurka, waxayna hubisay in ka hortagga cudurrada faafa iyo ka hortagga cudurrada faafa ay gaareen guul weyn oo buuxda. Cudurka faafa ...
U midoobi sidii mid ula dagaallami lahaa "faafa"
Iyada oo shaqada cusub ee kahortaga cudurka pneumonia ee ka hortagga iyo xakameynta cudurka pneumonia ay gashay marxalad aad u adag, shaqaalaha oo dhan ayaa ahmiyad weyn siinaya ka hortagga iyo xakamaynta cudurka faafa. Yang Zhanfei, maareeyaha guud ee shirkadda, wuxuu abaabulay dhowr kulan oo khadka tooska ah ah si loo diyaariyo geynta t ...
Mahadsanidiin shirkii oo si guul leh ku qabsoomay
Bishii Janaayo 18, hoolka hudheelka Nanhe waxaa lagu sharraxay nalal, in ka badan 100 shaqaale ah, oo ay ku jiraan hoggaanka oo dhan, qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha iyo moodello aad u fiican, ayaa isugu soo ururay hool ay ka muuqato farxad. Amaanta sanadka-dhamaadka 2019 iyo fiidkii qadarinta shaqaalaha ayaa halkan lagu dhigay. 17:00 pm, pa ...
Quangong Tools Co., Ltd. waxay kaqeybqaadataa carwada dhoofinta iyo dhoofinta Shiinaha
Wejigii koowaad ee Carwada Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Shiinaha (Canton Fair) ee sannadka 2019 ayaa ku timid jadwalka. Kumanaan ka mid ah shirkadaha waaweyn ee warshadaha iyo noocyada caanka ah ee qalabka qalabka, mashiinnada, qaybaha gawaarida, qalabka dhismaha iyo warshadaha nalalka ayaa halkan isugu yimid. Quangong Tools Co., Ltd. wuxuu ku yaal aagga C ee qalabka ...
Quangong Tools Co., Ltd. waxay kaqeybgashay Bandhigga Qalabaynta Caalamiga ah ee Shanghai Cologne
Si loo dhiirrigeliyo horumarka degdegga ah ee ganacsiga shirkadda, shirkaddu waxay kaqeybgashay Bandhigga Qalab-wadaagga Caalamiga ah ee Shanghai 2019 laga bilaabo Oktoobar 10 illaa Oktoobar 12, iyada oo in ka badan 30 macaamiil cusub iyo duug ah iyo wareejin ka badan 5 milyan yuan. Laga bilaabo Oktoobar 10 ilaa Oktoobar 1 ...
Hebei quangong soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Co., Ltd.